Tuesday, 04.30.2019, 01:49pm (GMT5.5)
संसारभर हाँस्य कलाकारहरुको लोकप्रियता अन्यको तुलनामा उच्च छ । हलिउड, बलियउडदेखि नेपालमै पनि हाँस्य कलाकारहरुको चर्चा र लोकप्रियता शिखरमा छ । नेपालमा एक हाँस्य कलाकार जोडीले त राज्यले गर्नुपर्ने काम गरेर अर्को उचाई छोइरहेका छन् र उनीहरुलाई देशको जिम्मा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
युक्रेनी जनताले राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प खोजे र यस्तो पात्रलाई शासक रोजे जो जनतालाई सधैं हँसाइरहन्थे । हुन पनि अबको केही समयपछि उनको भूमिका बदलिनेछ । राजनीतिमा कुनै अनुभव नभएका जेलेन्स्की पछिल्लो चुनावमा राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । यसको एउटै कारण हो स्थापित राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा उत्पन्न निराशा । विकल्प खोज्दा युक्रेनी जनताले ४१ वर्षीय जेलेन्स्कीलाई ७३.२ प्रतिशत मत दिए उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी पेट्रोले २४.४ प्रतिशत मत पाए ।
करिब ४ करोड २० लाख जनसंख्या रहेको युक्रेन पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी तथा पूर्वी भेगमा रूसी समर्थनमा झइरहेको सशस्त्र संघर्षबाट युत्रेन आक्रान्त छ । यसको विकल्पमाा जनताले कुनै राजनीतिक दलका नेता नरोजेर हाँस्य कलाकार रोजे । यो विश्व राजनीतिका लागि एउटा नमूना पाठ हो ।
आज नेपालको अवस्था युक्रेनको भन्दा कम छैन । अर्बौं अर्बका भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चिएका छन् । विकास निर्माणका काम नारामा मात्र छ । सुख र समृद्धिको आकर्षक नारा भट्याएर जनतालाई सुविधाको साटो सकस दिइरहेको छ । सरकारले गर्न चाहेर पनि केही गर्न नसकेको देखिन्छ । हुन त प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु सरकारले विकासको लहर ल्याएको दावी गरिरहेका छन् तर जनताले देखेकै छैन त्यो लहर ।
नेपालमा तीन तहको सरकार छ, नारामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो भनिएको छ तर गाउँमा विकासको नाममा विनाश मच्चिएको छ । भूकम्प पीडितका लागि सरकारले एकीकृत बस्ती समेत बनाउन सकेको छैन । सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणको हालत उस्तै छ । यस विपरीत एक हाँस्य कलाकार जोडी (धुर्मुस–सुन्तली)ले भूकम्प पीडितलाई दुईवटा बस्ती बनाइदिए भने महोत्तरी र रौतहटका मुसहर र बाढी पीडितका लागि एकएकवटा नमूना बस्ती बनादिए । अहिले पनि त्यो जोडी मुलुकको सेवामा सक्रिय छ । उनीहरुलाई राजनीतिमा आउन आव्हान भैरहेको छ आम जनताबाट ।
अहिले यो जोडी सरकारले नै गर्नुपर्ने काम गर्न लागिपरेको छ । भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन, जुन रंगशाला विश्वकै लागि नमूना हुने दावी छ । यी सबै कामा गर्ने कलाकारले हो कि सरकारले हो ? यस्तै गतिविधि र अवस्था कायम रहिरहने हो भने नेपालको आगामी निर्वाचनमा युक्रेनको परिणाम दोहोरियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । हो नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था नभएका कारण पनि जनताले विकल्प खोज्न अप्ठ्यारो परेको हो । यदि विकल्प नै खोज्नुपरे अहिलेको शासक–विपक्षी दलहरु कता पुग्छन् भन्न सकिन्न यदि नसुध्रने हो भने ।
युक्रेनी मतदाताले जस्तो मतपरिणाम आउने गरी भोट हाले त्यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गतिलो पाठ त हो नै यस विपरीत जनतालाई पनि सचेत पार्ने एउटा प्रभावकारी उदाहरण हो । अहिले नेपालमा दुई तिहाईको वामपन्थी सरकार छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ तर एकपछि अर्को अर्बौंको भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भैरहँदा समाजवाद कि नेतावाद भन्ने निरुत्तरित प्रश्न उठेको छ । यस्तै अवस्था कायम रहिरहने हो भने कुनबेला जनता जाग्ने हुन र त्यसपछि के हुने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
बालुवाटार जग्गा विक्री प्रकरणले जनताको मनमा आक्रोश उत्पन्न गराइरहेका बेला खुलामञ्चमा अवैध तरिकाले सटर बनाएर भाडा खाएको तथ्य खुलेपछि जनता सडकमै उत्रिए । कामनपाले तत्काल डोजर लगाएर टहरा भत्कायो । अब प्रश्न ती सटरमा पसल थाप्नेहरुलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने ? उनीहरुका सामान पनि नष्ट भएका छन् । सटर हटाउनु एउटा पक्ष हो भने त्यसरी सटर बनाउनु र बनाउन दिनेलाई कारबाही सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । के सरकारले त्यहाँ सटर बनाएर भाडा खानेलाई अनि सटर बनाउन दिनेलाई कारबाही गर्न सक्ला ? यदि यति काम गर्ने हो भने सरकारमाथि झिनो आशा पलाउने छ ।
अहिले एनलेसको झण्डै पौने खर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर नतिर्नका लागि अनेक दाउपेच रचिएको छ । सरकारले त्यो कर असुल्ने हो भने सो रकमबाट अर्को माथिल्लो तामाकोशी बनाउन सकिन्छ ।
हो सरकारले यस्तो काम गर्ने चासो नदेखाएर विकासको हावादारी गफल मात्रै छाँटिरहने हो भने युक्रेनको नियतिको शिकार हुनुपर्ने छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । दुई वर्षअघि फ्रान्समा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँ राजनीतिमा कमै मात्र नाम सुनिएका युवा इमान्युयल म्याक्रोले स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरुलाई धुलो चटाएका थिए । अब समय छ नेताहरुले आफ्नो विकल्प कोही छैन भनेर मनपरी गर्ने हैन कि आआफ्नो दलबाट नभए सडकबाट विकल्प खडा हुन सक्दोरहेछ भन्ने तथ्यलाई बुझेर काम गर्ने आगे उनीहरुकै मर्जी !